Hiiraan Online News About Somalia » Qeyb Ka Mid Ah Lacagta Ka Soo Baxda Kulanka Halyeeyada Arsenal & AC Milan Oo Garoomo Yaryar Loogu Dhisayo Caruurta Soomaaliyeed
Qeyb Ka Mid Ah Lacagta Ka Soo Baxda Kulanka Halyeeyada Arsenal & AC Milan Oo Garoomo Yaryar Loogu Dhisayo Caruurta Soomaaliyeed
Sep 2, 2016 - jawaab
Hay’ada tabarucaada Arsenal ee Arsenal Foundation ayaa muuqaal ay soo dhigtay barteeda Twitter waxa ay kaga hadleen inay gacan ka siinayaan caruurta Soomaaliyeed ee jecel kubada cagta inay helaan garoomo yaryar oo ay ku ciyaaraan iyagoo kaashanaya hay’ada Save The Children UK.
Kulan tabarucaad ah ayay berrito garoonka Emirates Stadium ku ciyaari doonaan halyeeyada Arsenal iyo halyeeyada AC Milan, lacagta kulankaas ka soo xarooto qeyb ka mid ah waxa ay Arsenal ugu deeqi doontaa hay’ada Arsenal Foundation kuwaasoo garoomo yaryar u dhisaya caruurta Soomaaliyeed.
Muuqaalka ay soo bandhigtay Arsenal Foundation waxaa ku jira wiil Soomaaliyeed oo 13 sanno jir ah oo lagu magacaabo Shacbaan, waxaana uu leeyahay: “Inaan ku ciyaarno dhulkaan waxa ay baabi’neysaa kabaheena, waxaa ka buuxa dhagxaan, quraarad, qodax, wax walba waa ayaa ka buuxa, haddii ay Arsenal inoo dhisto garoon aad iyo aad ayaanu u taageereynaa, waxaana ay sarre u qaadeysaa nolosheena, horumar ayaana ka gaareysaa kubada cagta.”
Arsenal Foundation ayaa muqaalka sidoo kale ku tiri: “Anagoo kaashaneynaa Save the Children waxaana garoomo yaryar ka dhiseynaa Soomaaliya. Lacagta laga helo kulanka Halyeeyada Arsenal waxaa ka caawin doontaa caruurta sida Sacbaan inay helaan meel nadiif ah oo ay ku ciyaaraan.”
Arsenal ayaa hal milyan ginni ku bixin doonta in garoomo yaryar loo dhiso caruurta dunida ka dib kulanka halyeeyada Arsenal iyo AC Milan.